GM: तपाईं सर्वेक्षण गलत गर्दै हुनुहुन्छ Martech Zone
GM: तपाईं सर्वेक्षण गलत गर्दै हुनुहुन्छ
शुक्रबार, जुन 28, 2013 बुधबार, जुलाई 20, 2016 Douglas Karr
एक दशक मेरो कार ड्राइभिंग पछि, मैले ठूलो जाने वा घर जाने निर्णय गरे। मेरो हजुरबुबाको कडिलाकको मायाबाट प्रभावित र साताको अन्त्यमा सवारीहरू सम्झनु भयो जहाँ उहाँ हामीलाई लिएर आउनुभयो ... मैले किने मेरो पहिलो क्याडिलाक यस बर्षको शुरुमा मैले खरीद गरेको डिलरशिप अचम्मको छ ... तल पृथ्वीका मानिसहरूसँग रिसेप्शनिस्ट, विक्रेता, सेवाका लागि। प्रत्येक चोटि म तेल परिवर्तनको लागि एक अपोइन्टमेन्ट गर्छु (मेरो आईफोन अनुप्रयोग बन्द ... कति राम्रो छ?!), मसँग ठूलो अनुभव छ।
र त्यसपछि यो हुन्छ।
मलाई सोधेँ, chided, लगभग कुनै सर्वेक्षण भर्न बिन्ती गरे जनरल मोटर्स संग पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट अंकहरू। यो स्पष्ट छ कि म एकल कक्षामा प्रवेश गर्न सक्दिन तर बाहेक पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट। यो मलाई स्पष्ट भयो कि त्यहाँ कर्मचारीहरु को लागी भयानक परिणामहरु छन् यदि त्यसो भएन भने।
यसले मलाई सोच्न लगाउँछ कि जीएमले उनीहरूको ग्राहक प्रतिक्रिया र उनीहरूको सन्तुष्टि ट्र्याक गर्न को लागी एक उत्तम उपकरण के रूप मा लाग्यो र यसलाई एक हतियारमा परिणत गर्‍यो जुन उनीहरूका डीलरहरू र कर्मचारीहरूले डराएका छन्। कि डिलरशिप मुद्रण को समस्या को माध्यम बाट जान्छ र हरेक सेवा विवरण को कभर पत्र stapling, र केहि समय खर्च यो खर्च, वास्तवमा दुर्भाग्य हो। मँ यो ब्ल्ग पोष्टमा डीलरशिप पनि उल्लेख गरिरहेको छैन किनकि म चाहान्छु कि उनीहरूले यसको लागि समस्यामा पर्न नपरोस्।
कुनै पनि कम्पनी जसले ग्राहक बुद्धिमत्ता लिन्छ बुझ्दछ कि त्यहाँ दुबै मार्जिन मार्फत त्रुटि छ र मानव त्रुटि आउँदैछ जब यो ग्राहक सेवाको कुरा आउँछ। अर्को शब्दमा, तपाईंको टीमले कति राम्रो प्रदर्शन गर्दछ भन्ने कुरामा फरक पर्दैन, केही व्यक्तिहरू केवल खराब दिन हुँदैछन् वा झटक्काहरू छन् र तिनीहरूले तपाईंलाई उत्कृष्ट स्कोर दिदैनन्। अन्य समयमा, तपाईंको सेवा टोलीले गल्ती गर्न सक्दछ ... तर यो उनीहरूले यसबाट कसरी फर्कन्छन् भन्ने कुराको महत्व छ, चाहे उनीहरूले पूर्ण काम गरे कि गर्दैनन्। अर्को शब्दहरुमा, माथि र तल%% बाहिर फाल्नुहोस् र बाँकी राख्नुहोस् तपाइँ कसरी गरिरहनु भएको सही मापनका लागि। उपभोक्ताहरू विश्वास गर्दैनन् कुनै पनि कम्पनीले प्रदान गर्दछaउत्तम--सितारा अनुभव, त्यसैले यो माग रोक्नुहोस्।
म विश्वस्त छु कि यस ग्राहकको सन्तुष्टि डाटा जम्मा गर्ने प्रेरणा सबै राम्रो कारणहरूको लागि हो। तर कार्यान्वयन मुद्दा जस्तो देखिन्छ। कम्पनीहरू एक पटकमा गल्ती गर्न डराउनु हुँदैन, वा पागल उपभोक्ताको क्रोधको खराब अन्तमा हुनुपर्दछ।
विडंबना, पक्कै पनि, यो बाहिर यो हो सर्वेक्षण, म हुँ पूर्ण सन्तुष्ट मेरो व्यापारी संग।
टैग: cadillacग्राहक सन्तुष्टिग्राहक सेवाग्राहक सर्वेक्षणgmसन्तुष्टि सर्वेक्षण
२०१ Ran मा खोज्नुहोस्
लिंक्डइन टेस्टिंग नयाँ मौसम सूचना सुविधा
जुन 28, 2013 मा 1: 32 PM
पहिलो हस्त ज्ञान बाट, ग्राहक सेवा टिप्पणिहरु, VOC- ग्राहक को आवाज आदि, एक स्टोर प्रबन्धक र आफ्नो स्टाफ को लागी क्रूर हुन सक्छ। जब तपाइँ तपाइँको कर्मचारलाई हरेक ग्राहकको अपेक्षा भन्दा बढि तालिम दिन सक्दो प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, कुण्डलको साथ एक ग्राहकले कुनै पनि कारणका लागि पिसाउन तपाईको समग्र साप्ताहिक वा मासिक स्कोरमा विनाशकारी तल्लो रेखा प्रभाव हुन सक्छ। कहिलेकाँही तपाईं आवश्यक हरेक मेट्रिक भन्दा बढी गर्न सक्नुहुनेछ तर यदि तातो बटन ग्राहक सेवा हो भने, ती सबै एक छेउमा सारिन्थ्यो।
अप्रिल 11, 2015 मा 11: 00 PM
जीएम सेवामा मात्र आवश्यक पर्दैन, तर बिक्री गरिएको प्रत्येक नयाँ गाडीको लागि यी ग्राहकहरूले जीएमबाट सर्वेक्षण लिन सक्छन्। त्यहाँ फेरि यदि ग्राहकले यसलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गर्दैन। यो सेलम्यानको लागि असफल मानिन्छ जुन उनीहरूले वर्षभरि कमाउने आम्दानीमा डेट्रेमेन्ट हुन्छ। मलाई थाहा छ मैले GM र नयाँ दुबै प्रयोग हुने गाडीहरू बेचें।
जुन 11, 2015 मा 8: 54 PM
अटो डिलरहरू आफ्ना उत्पादकहरूमा उनीहरूको उत्पादनमा उनीहरूको गुणस्तरको गलत झुकाव बढाउन उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सत्य यो हो कि तिनीहरू बकवास कारहरू उत्पादन गर्दछन। म business० बर्ष भन्दा बढि यो व्यवसायमा छु र बोर्डमा गुणवत्ता गिरावट देखेको छु। भविष्यमा यसमा प्रवेश गर्ने योजना गर्ने जो कोहीलाई पनि यो एक मजाक हो। मेरो उत्तम सल्लाह, टाढा रहनुहोस् यहाँ कुनै भविष्य छैन ... ..
जुन 11, 2015 मा 9: 43 PM
धन्यवाद सर। टोयोटाको सेवा प्रबन्धकबाट आउँदैछ (र मेरो क्यारियरमा अन्य महत्वपूर्ण र घरेलु डिलरहरू), तिनीहरू सबै समान छन्। यदि केवल उपभोक्ताहरूले उनीहरूको आवाज सुनेका हुन्, डिलरशिप कर्मचारीहरूमा निराशामा होइन तर यो कुरा बुझेर कि यो कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ, तपाईंले गर्नुभयो। सन्तुष्टि को वास्तविक सूचक एक्लो अवधारणा हुनु पर्छ! के ग्राहकहरु तपाइँ संग कुनै प्रकारको अनुभव पछि फिर्ता आउँदैछन्। यसले कसलाई संघर्ष गरिरहेको छ र कसले "वास्तवमै असाधारण" सेवा दिन्छ भनेर प्रकाश पार्नुपर्दछ। - यो तिनीहरूको सर्वेक्षणमा टोयोटाको उच्च मूल्या rated्कन गरिएको स्कोर हो। चेरी।
जुन 11, 2015 मा 10: 22 PM
बिल्कुल चेरी ... अधिक सहमत हुन सकेन। मलाई लाग्छ कि यो तीन भिन्न प्रश्नहरूमा तल आउँछ:
के तपाईंको अर्को अटोमोबाइल [ब्रान्ड] हुनेछ?
के तपाईं हामीबाट आफ्नो अर्को कार किन्नुहुनेछ?
के तपाईं हाम्रो कार हाम्रो सेवा गरीन्छ?
प्रत्येक पिन पोइन्ट गर्दछ डिलरको चिन्ता… ब्रान्ड, बिक्री र सेवा। तिनीहरू मध्ये कुनै एकको जवाफले डिलरशिप सुधार गर्न मद्दत गर्न केहि अविश्वसनीय जानकारी निम्त्याउन सक्छ।
तपाईंको इनपुट को लागी धन्यवाद!